रंगेहात प’क्राउ गर्न श्रीमान ६ घ’ण्टा खाटमुनी लुकेको श्री’मानले जब श्रीमतीको यस्तो दृ’ष्य देखेप’छी…. – Dailny NpNews
रंगेहात प’क्राउ गर्न श्रीमान ६ घ’ण्टा खाटमुनी लुकेको श्री’मानले जब श्रीमतीको यस्तो दृ’ष्य देखेप’छी….
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ समय: २१:३४:५६
काठमाडौं। ८ वर्ष अघि विवाह गरेका भरतकुमारलाई आफ्नो श्रीमतीको अरु कसैसंग पनि सम्बन्ध छ भन्ने शंका थियो । उनी श्रीमतीलाई रंगेहात पक्राउ गर्न चाहन्थे । त्यो समय एक दिन आयो । उनले श्रीमतीको प्रेमीलाई संसारवाटै विदा गरिदिए । यो घ,टना भारतको बंगलोरमा भएको हो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
बुधवार राती, भरत दिउँसो २।०० बजेतिर घर आए र आफ्नो कोठाको खाटमुनि लुके।भरत आइपुगेको करिब डेढ घण्टा पछि शिवराज पनि उनको घरमा पुगे। शिवराज दिउँसोतिर घर आइपुगे र भरत लुकेको ओछ्यानमा सु ते। भरत अझै पनि त्यहाँबाट हटेनन् र तिनकी श्रीमती पनि त्यहीं थिइन् । जव साँझ परेपछि भरतको श्रीमती शौचालयमा गइन्, भरतले बाहिरबाट शौचालयको ढोका बन्द गरे र शिवराजलाई च क्कु ले प्र’हा र गरे । शिवराजको घटनास्थलमै निधन भयो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****